Excess anger can cause heart attack even inahealthy Dr Om | Dr. Om Murti Anil
Heart Attack 11257 viewed
रिसले ह्दयाघातसम्म गराउन सक्ने तीन वर्षअघिको यो घटना सम्झँदै मुटु रोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिल भन्छन्, ‘अस्पतालमै ह्दयाघात भएकाले एक घण्टाभित्रै उपचारले उनी जोगिए ।’ उनको मुख्य धमनीमा ब्लकेज थियो ।’
ह्दयाघात भएकाहरूको चिकित्सकीय इतिहास केलाउँदा हर्ट अट्याक हुनुमा रिस र क्रोधले समेत सघाएको प्रशस्त उदाहरण देखिन थालेको डा. ओममूर्ति बताउँछन् । रिसले मुटुको रक्तनलीमा अवरोध भएका वा नभएका दुवैलाई ह्दयाघात हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै डा. ओममूर्ति भन्छन्, ‘पछिल्लो नयाँ अनुसन्धानले के भन्छ भने धेरै बढी रिस देखाउनेलाई ह्दयाघात हुन सक्छ ।’ रिस उठेको दुई घण्टाभित्र ह्दयाघातसँगै पक्षाघात (स्ट्रोक), मुटुको चालमा गडबडी हुने सक्ने उनी बताउँछन् ।
रिसले ह्दयाघात गराउने कारणबारे बताउँदै डा. ओममूर्ति भन्छन, ‘रिसले मुटुको चाल र रक्तचापमा अत्यधिक वृद्घि गर्छ र रक्तनलीको व्यास घटेर प्लाक (रगतको नलीमा जमेको बोसो) मा बल पुग्छ जसले यो एक्कासि फुट्छ । त्यसपछि त्यो ठाउँमा रगत जमेर रक्तप्रवाह अचानक अवरुद्घ भई ह्दयाघातको अवस्था आउँछ ।’
हामीलाई रिस उठेपछि हाम्रो तल र माथि (सिस्टोलिक र डायस्टोलिक) को रक्तचाप बढ्छ । यसले मुटुको विद्युतीय चाललाई भंग गर्छ । यसले मुटुको मांसपेशी र पातलो सतहलाई समेत नष्ट गर्छ । यतिसम्म कि रिसले कोरोनरी मुटु रोगको जोखिम तेब्बर बढाउँछ । रिसले शरीरमा एड्रिनलिन र नोराड्रिलिन हार्मोनको स्तरमा समेत वृद्घि हुन्छ । यसले उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक, मृगौला फेल हुने, अम्लता, छाती दुखाइ, तीव्र टाउको दुखाइ लगायतका विभिन्न रोग हुन सक्छ । बढी रिसले गर्दा मुटुको रगत पम्प गर्ने क्षमतामा पनि कमी आउँछ । यसले गर्दा मुटुका मांसपेशीहरूमा क्षति पुग्न थाल्छ र हर्ट अट्याक हुने खतरा बढ्छ ।
रिसले मान्छे मार्न सक्ने भएकाले यसको उचित प्रबन्धन गर्नुपर्ने आंैल्याउँदै डा. ओममूर्ति बताउँछन् । रिस मनुष्यमा देखिने प्राकृतिक भावना हो । सामान्यतया हामीलाई निराशा हुँदा, चिडचिडाहट हुँदा, अनुकूल काम नहँुदा रिस उत्पन्न हुन्छ । रिस प्राकृतिक कुरा भएकाले यसबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति सम्भव छैन । रिस उठ्नु सामान्य कुरा भए पनि यसले तपाईंलाई हानि गर्छ भने पक्कै पनि तपार्इंका लागि खतराको घन्टी हो नै । रिस प्रबन्धनका लागि डा. ओममूर्ति बिरामीलाई सबैभन्दा पहिले रिस उठ्ने स्थितिको वास्ता नगर्न सल्लाह दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘रिस उठ्न सक्ने व्यक्ति, प्रक्रिया, स्थितिलाई वास्ता नगर्नुस् । मनोरञ्जन गर्नुका साथै वास्तविकता महसुस गरेर आराम गर्नुले